N'ikpeazụ Tiangong-1 ga-ada na Sọnde na-abịa | Akụkọ akụrụngwa
Izu ole na ole gara aga, anyị enweelarị ohere ikwu maka eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ oghere ndị China Tiangong-1 bụ ka a ghara ịchịkwa ya n'ụzọ nkịtị, ihe ga-emesị mee ya gbaga n’ụwa. Ikekwe akụkụ nke kachasị echegbu anyị gbasara nsogbu a niile bụ na, na enweghị nchịkwa, ruo ụbọchị ole na ole gara aga, amabeghị ya nke ọma mgbe ọ ga-adakwasị ụwa na ọkachasị ebe.
N’ikpeazụ, anyị ga-echere ruo ụbọchị ndị a iji mụtakwuo nkọwa gbasara eziokwu bụ na otu ọdụ ụgbọ elu ọ bụla dara n’ụwa. Egwu ahụ, dị ka ndị ọkachamara ghọtara izu ole na ole gara aga, ndị ọkachamara na-enyocha ọnọdụ Tiangong-1 mgbe niile bụ na, N'ihi oke ya, ọ gaghị emebi kpamkpam na mbata ya n'ụwa. ya mere ihe zuru ezu ga-adaba, ma ọ bụ n'oké osimiri, ma ọ bụ n'elu ala.
1 Obere akụkọ ihe mere iji ghọta ihe kpatara Tiangong-1 ji dịrị
2 Tiangong-1 na-aga njem na 27.000 kilomita / awa, ihe na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịkọ ebe ọ ga-ada
Obere akụkọ ihe mere iji ghọta ihe kpatara Tiangong-1 ji dịrị
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na China kwụpụrụ iche maka ịgbaso atụmatụ dị iche iche dị iche iche maka ọnụnọ ya dị iche na agbụrụ oghere. N'ụzọ nkịtị na n'echiche a anyị nwere ike ikwu na China na-agbaso ụzọ nke ya mgbe niile, na-eme ka itinye ego ndị dị mkpa na-enweghị mkpa maka mmekorita mpụga. N'iburu nke a n'uche, ọ bụghị ruo mgbe Septemba 30, 2011 mgbe obodo ahụ jisiri ike kpoo onye e mere baptizim dị ka Tiangong-1, Otu na n'oge 2012 na 2013 ọ bịara n'ụlọ ihe ruru astronauts isii n'ime.
Banye ntakịrị ntakịrị, ekwesịrị ịdeba na anyị na-ekwu maka ihe mgbagwoju anya ihe dị ka mita 10 n'ogologo na mita 3 na dayameta. N'agbanyeghị na ọ bụ ụlọ nyocha akwụkwọ mkpịsị aka pere mpe pere mpe n'akụkọ ihe mere eme, otu a ka esi me ya baptism n'obodo ahụ n'oge ahụ, eziokwu bụ na anyị na-ekwu maka Ọdịdị 8.500. Ọ bụrụ na anyị etinye ịdị arọ a n'ọnọdụ, gwa gị na ọ dị ka nke ụgbọ mmiri dị ka SpaceX Dragon capsule nwere ike inwe, karịa nke nke ogige ndị ọzọ yiri ya dịka MIR Russia na kilogram 120.000.
Ozugbo etinyere Tiangong-1 n'ime orbit, ọ malitere ịrụ ọrụ na orbit nke 198 x 332 kilomita dị elu na ogo 42 nke ọchịchọ. Mgbe e mesịrị, ohere oghere dị elu ruo kilomita 336 x 353. Ozugbo ọnọdụ a ruru, a na-ebulite ọdụ ụgbọ elu otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'afọ, dị ka achọrọ, iji kwụọ ụgwọ maka esemokwu. N'oge a na na 2016, gọọmentị China kwụsịrị njikwa ọdụ ahụ ka ha ghara ịga n'ihu na-arụ ọrụ mbuli elu, nke mere ka anyị ruo ebe anyị nọ taa.
Tiangong-1 na-aga njem na 27.000 kilomita / awa, ihe na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịkọ ebe ọ ga-ada
Otu nsogbu dị ukwuu ndị sayensị na-eche ihu mgbe ha na-ebu amụma ebe Tiangong-1 nwere ike ịdaba bụ eziokwu bụ na, mgbe ọ banyere n'ikuku, njem na ọsọ dị nso na 27.000 kilomita / awa. Nke a na-eme mpaghara mmetụta ya, dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo dị n'elu ahịrị ndị a, sara mbara nke ukwuu. N'agbanyeghị nke ahụ, a ga-eburu n'uche na, dị ka nkwupụta gọọmentị ESA si kwuo, anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ebe ọ bụ na, n'agbanyeghị ihe egwu Tiangong-1 gụnyere ịda na ala, eziokwu bụ na ihe puru omume nke iti mmadu ihe ma obu ulo bu 1 rue 10.000.
N'ihi nke a na, n'agbanyeghị a na-atụ anya ka ọdụ ọdụ oghere dabara na ụwa na Eprel 1, nke bu eziokwu bu na anyi ekwesighi inwe ma obu were onodu a dika ihe di egwu. N'oge a na imecha, m ga-achọ ịzo aka na NASA n'onwe ya, ụlọ ọrụ na n'etiti nyocha ndị e bipụtara, kwupụtara na ihe puru omume na ihe dị ka tọn 6 nwere ike ịda anyị dị ala karịa nke egosiri na mbụ, na-eguzo na 5 Ijeri 1.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » N’ikpeazụ Tiangong-1 ga-ada na Sọnde nke na-abịa